आइतबार​, असार १९ २०७९ ०५:१५ PM
सोमबार २ फागुन २०७८ ०३:३० PM
कोभिडपछिको आंशिक रिकभरी र बढ्दो विलासी वस्तुको उपभोगले हाम्रो बाह्य क्षेत्रमा बढी दबाब देखिएको छ । पछिल्लो समय सडकमा लक्जरी प्राइभेट सवारीसाधन (कार, मोटरसाइकल) को प्रयोग झन् भन्दा झन् बढेको देखिन्छ । यसले सवारी साधनसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयातसमेत बढाएको छ । र, यही समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले हाम्रो बाह्य क्षेत्र थप प्रभावित बनेको हो ।
‘प्रणालीमा सुधार नहुँदा बजेट खर्चमा समस्या, विकासमैत्री कानुन छैन’
बिहीबार २७ माघ २०७८ ०९:२४ PM
स्रोत व्यवस्थापनबिनाका योजनाहरू मुख्य समस्याका रूपमा छन् । त्यस्ता योजनाहरूमा कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने वा स्रोत सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
भारतीय बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र आगामी कदम
बुधबार २६ माघ २०७८ १२:०३ PM
भारतको दिल्लीसँग मात्रै नभई नेपालसँग सिमाना जोडिएका युपी, बिहार, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश लगायतका भारतीय प्रदेशहरुसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । भारतका यी प्रदेशहरुले कृषि तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगहरुमा ठूलो परिमाणमा लगानी बढाएका छन् । नेपालको पनि भारतसँग सिमावर्ती क्षेत्र विशेष गरी तराईका फाँटहरुमा कृषि र उद्योग सञ्चालनमा रहेकाले त्यस्ता प्रदेशसँग सहकार्य गरी अघि बढ्दा फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो भने गभर्नर अगाडी बढेर प्रतिवाद गर्नुपर्छ’
शनिबार २२ माघ २०७८ ०९:४२ AM
बैंक मर्जमा लैजाने राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा हो । यसमा सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप मान्य हुँदैन भन्ने कुरालाई जोडतोडका साथ गभर्नरले राख्न सक्नुपर्छ ।
महामारीले थला परेको अर्थतन्त्र संकुचित र संकीर्ण नीतिहरूले पुनरुत्थान असम्भव
बुधबार १९ माघ २०७८ ०४:१० PM
नेपाल सरकारले पूर्वाधार क्षमता सुधार गर्न रणनीतिक सडक सञ्जाल, रेल, सुरुङमार्ग लगायतका निर्माणलाई तीव्रता दिने हो भने यसले व्यवसायको ‘लजिटिक कस्ट’ कम गराउँछ ।
बैंकिङ व्यवसायमा नैतिक जोखिमको सवाल
मङ्गलबार १८ माघ २०७८ १०:४२ AM
वित्तीय र आर्थिक जोखिम अवधारणाभन्दा पनि उच्च तहका व्यस्थापनको उच्च व्यावसायिक नैतिकता, संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, सहभागितामूलक व्यवस्थापन, उच्च मनोवलयुक्त वातावरण आदिको निर्माण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।
खानी उत्खनन जति गरेका छौं त्यति नै रोयल्टी बुझाएका छौं, हाम्रो गल्ती कहाँ छ ?
बुधबार १२ माघ २०७८ ०६:२२ PM
लिज पिरियडमा जति खानी खन्न सकिन्छ भनेर हामीले अनुमान गरेका छौं, त्यो परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गरेका छैनौं । उत्खननका कारणले खानीमा क्षति भएको छैन, पहिरो गएको छैन, कसैलाई चोटपटक लागेको छैन, मान्छेको मृत्यु भएको पनि छैन ।
तथ्यांकहरुले नेपालको अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख देखाउछ तर अझै संकटग्रस्त भने भइसकेको छैन् । सरकार संवेदनशील बन्न सके यी चुनौति सामाना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनः ट्रयाकमा फर्काउन सकिन्छ ।
राज्यले अख्तियार गरेका सबै नीतिनियम पालना गरी हवाई सेवा सुचारु गर्दा पनि मोनोपोली कसरी हुन्छ ? भाडादर राज्य आफैतोक्छ अर्थात् सरकारको सहमतिमा हवाई क्षेत्रको नियामक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भाडा तय गर्छ । उडान गन्तव्य लगायतका हवाई उडानहरुको नियमित अनुगमन प्राधिकरणले गर्छ ।